ကုနျသတ်ေတာ သင်ျဘောပျေါမှ ပငျလယျထဲသို့ ပွုတျကသြညျ့ ကုနျသတ်ေတာမြားအတှကျ သင်ျဘောလိုငျး၏ တာဝနျရှိမှု - Logistics Guide
လှနျခဲ့သော၂ နှဈ (၂၀၁၈ ခုနှဈ ဇနျနဝါရီလ ၂၀ ရကျ) နံနကျ ၀၁:၂၇ နာရီတှငျ CMA CGM George Washington ကုနျသတ်ေတာ သင်ျဘောကွီးသညျ တရုတျနိုငျငံ Xiamen ဆိပျကမျးမှ အမရေိကနျနိုငျငံ လော့ဈအိနျဂလြိဈဆိပျကမျးသို့အသှား Pacific Ocean မွောကျဖကျတှငျ ရာသီဥတုဆိုးရှားမှုနှငျ့ တှကွေုံ့ခဲ့ကာ ကုနျသတ်ေတာ ၁၃၇ လုံးရထေဲပွုတျကြ ကာ ၈၅ လုံးပကျြစီးခဲ့ပါတယျ။ သင်ျဘောကွီးဟာ ညာဘကျခွမျးသို့. ၂ဝံ တိမျးစောငျး လူးသှားပွီး စက်ကနျ့ အနညျးငယျ အကွာတှငျ ဘယျဘကျခွမျးသို့ ၂ဝံ တိမျး စောငျးကာလူးသှားပါတယျ။
ထိုသို့ သင်ျဘောလူးသှားသဖွငျ့ Bay 54 ၊ Bay 58 နှငျ့ Bay 18 တို့မှ ကုနျသတ်ေတာမြား ပငျလယျထဲသို့ ပွုတျကြ ပကျြစီးမှုမြားဖွဈပျေါခဲ့ပါတယျ ။ သင်ျဘောဟာ အင်ျဂလနျနိုငျငံမှာ မှတျပုံတငျ ထားတာဖွဈပွီး ကုနျသတ်ေတာ teu ၁၄,၄၁၄ တငျဆောငျနိုငျပါတယျ။ (World Maritime News)
အခုဖွဈစဉျကို စုံစမျးစဈဆေးခဲ့တဲ့ အင်ျဂလနျနိုငျငံ Marine Accident Investigation Branch (MAIB) က စုံစမျးတှရှေိ့ခကျြအစီရငျခံစာကို လှနျခဲ့တဲ့ တဈပါတျက ထုတျပွနျခဲ့ပါတယျ။ အစီရငျခံစာအရ ကုနျသတ်ေတာမြား သင်ျဘောလူးစဉျ ပွုတျကြ ပကျြစီး ရခွငျးသညျ standard ဆိုဒျမဟုတျသညျ့ ၅၃ ပေ ကုနျသတ်ေတာမြား၏ ဖှဲ့စညျးတညျဆောကျမှုနှငျ့ ဆိုငျသညျ့ ကွံခိုငျမှုလြော့နညျးခွငျး၊ ကုနျသတ်ေတာ အလေးခြိနျ မမှနျမကနျကွညောထားခွငျး၊ ကုနျသတ်ေတာ အား ထားသိုမှု မှားယှငျးခွငျး၊ ကုနျသတ်ေတာ ခညျြနှောငျမှု လြော့နညျးနခွေငျး တို့ကွောငျ့ဖွဈရတာလို့ သိရပါတယျ။
CMA CGM G. Washington သင်ျဘော၏ ကုနျသတ်ေတာ ပကျြစီး ဆုံးရှူံးမှုကို တဈပွိုငျတညျး ဖွဈစေ သညျ့ အကွောငျး ၂ ရပျရှိပါသညျ။ အကွောငျးတဈရပျမှာ ကုနျသတ်ေတာထားသိုမှု မှားယှငျးခွငျး (mis-stowed) နှငျ့ တုတျနှောငျမှု လြော့ရဲခွငျး (loose lashing) ဖွဈပွီး အခွား အကွောငျးတဈရပျမှာ ပငျလယျပွငျမှာတှကွေုံ့ရသညျ့ ဘေးသငျ့မှု ကွောငျ့ဖွဈပါတယျ။
ဒါပမေဲ့ Hague (or) Hague Visby rules ရဲ့Article IV, rule 2(c) အရ ပငျလယျမှာတှကွေုံ့ ရတဲ့ ဘေးသငျ့မှု၊ မတျောတဈဆမှုတို့ကွောငျ့ ဖွဈပျေါ လာတဲ့ ပကျြစီး ဆုံးရှူးံးမှူတို့အတှကျ သယျဆောငျသူ သင်ျဘောလိုငျးတှငျတာဝနျမရှိလို့ပွဌာနျးထားပါတယျ။
ဒါပမေဲ့ Article III, rule 1(c) မှာ သယျဆောငျသူ သင်ျဘောလိုငျးက လိုကျနာရမယျ့တာဝနျကိုပွဌာနျး ထားပွီး ထိုတာဝနျသညျ Article IV, rule2(c) အရ သယျဆောငျသူ သင်ျဘောလိုငျး ရရှိမညျ့ လြျောကွေးပေးဆောငျရမှုမှ ကငျးလှတျခှငျ့၊ ကာကှယျခုခံပိုငျခှငျ့ တို့အပျေါ ကြျောလှနျလှမျးမိုး ပါသညျ။ ဆိုလိုတာက သယျဆောငျသူ သင်ျဘောလိုငျး အနဖွေငျ့ လိုကျနာရမညျ့တာဝနျကို မကပြှေနျပါက၊ ကာကှယျခုခံပိုငျခှငျ့ နှငျ့ ကငျးလှတျခှငျ့မြား ရရှိ ခံစား နိုငျခှငျ့မရရှိပါဘူး။ (Maxine Footwear Co. Ltd. V. Canadian Merchant Marine (1959).
Article III, rule 1(c) မှာ ဖျောပွထားတာက "သင်ျဘောကုနျခနျး၊ အအေးခနျး နှငျ့ ကုနျထညျ့သှငျး သယျဆောငျသညျ့ သင်ျဘော၏ အခွားအစိတျအပိုငျး မြားကို ကုနျမြား မထိခိုကျ၊ မပကျြစီးဘဲ ထညျ့သှငျး သယျဆောငျနိုငျအောငျ သင်ျဘောမထှကျခငျကပငျ ထိုကျသငျ့သျော လုံလဝိရိယစိုကျထုတျ၍ (due diligence) ပွုလုပျပေးလိုကျရမညျ" လို့ပွဌာနျးထားပါတယျ။
Article III, rule 1" The carrier shall be bound before and at the beginning of the voyage to exercise due diligence to:
MAIB ရဲ့ အစီရငျခံစာအရ သင်ျဘောလိုငျး အနဖွေငျ့ ကုနျသတ်ေတာမြားကို တုတျနှောငျရာတှငျ လြော့ရဲမှု ကွောငျ့ ကုနျသတ်ေတာမြားပွိုလဲပကျြစီးခွငျး၊ ပငျလယျထဲသို့ ပွုတျကရြခွငျးသညျ အကွောငျးတဈရပျ ဖွဈသညျလို့ဖျောပွထားပါတယျ။ "Houlden v. S.S. Red Jacket, 1977" အမှုတှငျ သင်ျဘောလိုငျးမှ ကုနျတငျပို့သူအား ကုနျပစ်စညျးထညျ့သှငျးနိုငျရနျ ပံပိုးပေးသျော လိုငျးပိုငျ ကုနျသတ်ေတာမြားကို သင်ျဘော ၏ ကုနျထညျ့သညျ့ အစိတျအပိုငျးအဖွဈသတျမှတျ ထားပါသညျ။ ဒါကွောငျ့ Article III, rule 1(c) နဲ့ အကြုံးဝငျ သကျဆိုငျပါတယျ။
Article III, rule2မှာ ဖျောပွထားတာကတော့ သယျဆောငျသူ သင်ျဘောလိုငျးသညျ ကုနျစညျမြားကို သငျတော့မှနျကနျစှာ တငျဆောငျ၊ ကိုငျတှယျ၊ ထားသိုး ..... ရမယျ။ ဒီတာဝနျဟာ Article IV မှာ ပွဌာနျးထားတဲ့ ကငျးလှတျခှငျ့တှေ အပျေါမူတညျ သညျလို့ ဖျောပွထားပါတယျ။
2." Subject to the provisions of Article 4, the carrier shall properly and carefully load, handle, stow, carry, keep, care for, and discharge the goods carried."
MAIB ရဲ့ report အရ CMA CGM G. Washington သင်ျဘောမှာ standard size မဟုတျတဲ့ ၅၃ ပေ ကုနျသတ်ေတာတှကေို ထားသိုပုံ မှားယှငျး တယျလို့ ဖျောပွထားပါတယျ။ ဒါကွောငျ့ သင်ျဘောလိုငျး အနနေဲ့ Article IV, rule 2(c) အရ ပငျလယျပွငျ မှာတှကွေုံ့ရတဲ့ ဘေးသငျ့မှုကွောငျ့ ဖွဈပျေါခဲ့ရတဲ့ ကုနျသတ်ေတာမြား ဆုံးရှုးံပကျြစီးမှု အတှကျ လြျောကွေး ပေးဆောငျရမှုမှ ကငျးလှတျခှငျ့ကို ရယူခံစားခှငျ့ မရနိုငျပါဘူး။
CMA CGM G.Washington ကို စဈဆေးပေးရတဲ့ classification society ဖွဈတဲ့ Bureau Veritas ကလညျး ၅၃ ပေ ကုနျသတ်ေတာမြားအတှကျ သူ့ရဲ့ စညျးမဉျြးမြားကို ပွနျလညျပွငျဆငျလိုကျပွီ ဖွဈပါတယျ။
ကုန်သေတ္တာ သင်္ဘောပေါ်မှ ပင်လယ်ထဲသို့ ပြုတ်ကျသည့် ကုန်သေတ္တာများအတွက် သင်္ဘောလိုင်း၏ တာဝန်ရှိမှု
လွန်ခဲ့သော၂ နှစ် (၂၀၁၈ ခုနှစ် ဇန်နဝါရီလ ၂၀ ရက်) နံနက် ၀၁:၂၇ နာရီတွင် CMA CGM George Washington ကုန်သေတ္တာ သင်္ဘောကြီးသည် တရုတ်နိုင်ငံ Xiamen ဆိပ်ကမ်းမှ အမေရိကန်နိုင်ငံ လော့စ်အိန်ဂျလိစ်ဆိပ်ကမ်းသို့အသွား Pacific Ocean မြောက်ဖက်တွင် ရာသီဥတုဆိုးရွားမှုနှင့် တွေ့ကြုံခဲ့ကာ ကုန်သေတ္တာ ၁၃၇ လုံးရေထဲပြုတ်ကျ ကာ ၈၅ လုံးပျက်စီးခဲ့ပါတယ်။ သင်္ဘောကြီးဟာ ညာဘက်ခြမ်းသို့. ၂ဝံ တိမ်းစောင်း လူးသွားပြီး စက္ကန့် အနည်းငယ် အကြာတွင် ဘယ်ဘက်ခြမ်းသို့ ၂ဝံ တိမ်း စောင်းကာလူးသွားပါတယ်။
ထိုသို့ သင်္ဘောလူးသွားသဖြင့် Bay 54 ၊ Bay 58 နှင့် Bay 18 တို့မှ ကုန်သေတ္တာများ ပင်လယ်ထဲသို့ ပြုတ်ကျ ပျက်စီးမှုများဖြစ်ပေါ်ခဲ့ပါတယ် ။ သင်္ဘောဟာ အင်္ဂလန်နိုင်ငံမှာ မှတ်ပုံတင် ထားတာဖြစ်ပြီး ကုန်သေတ္တာ teu ၁၄,၄၁၄ တင်ဆောင်နိုင်ပါတယ်။ (World Maritime News)
အခုဖြစ်စဉ်ကို စုံစမ်းစစ်ဆေးခဲ့တဲ့ အင်္ဂလန်နိုင်ငံ Marine Accident Investigation Branch (MAIB) က စုံစမ်းတွေ့ရှိချက်အစီရင်ခံစာကို လွန်ခဲ့တဲ့ တစ်ပါတ်က ထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။ အစီရင်ခံစာအရ ကုန်သေတ္တာများ သင်္ဘောလူးစဉ် ပြုတ်ကျ ပျက်စီး ရခြင်းသည် standard ဆိုဒ်မဟုတ်သည့် ၅၃ ပေ ကုန်သေတ္တာများ၏ ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်မှုနှင့် ဆိုင်သည့် ကြံခိုင်မှုလျော့နည်းခြင်း၊ ကုန်သေတ္တာ အလေးချိန် မမှန်မကန်ကြေညာထားခြင်း၊ ကုန်သေတ္တာ အား ထားသိုမှု မှားယွင်းခြင်း၊ ကုန်သေတ္တာ ချည်နှောင်မှု လျော့နည်းနေခြင်း တို့ကြောင့်ဖြစ်ရတာလို့ သိရပါတယ်။
CMA CGM G. Washington သင်္ဘော၏ ကုန်သေတ္တာ ပျက်စီး ဆုံးရှူံးမှုကို တစ်ပြိုင်တည်း ဖြစ်စေ သည့် အကြောင်း ၂ ရပ်ရှိပါသည်။ အကြောင်းတစ်ရပ်မှာ ကုန်သေတ္တာထားသိုမှု မှားယွင်းခြင်း (mis-stowed) နှင့် တုတ်နှောင်မှု လျော့ရဲခြင်း (loose lashing) ဖြစ်ပြီး အခြား အကြောင်းတစ်ရပ်မှာ ပင်လယ်ပြင်မှာတွေ့ကြုံရသည့် ဘေးသင့်မှု ကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်။
ဒါပေမဲ့ Hague (or) Hague Visby rules ရဲ့
Article IV, rule 2(c) အရ ပင်လယ်မှာတွေ့ကြုံ ရတဲ့ ဘေးသင့်မှု၊ မတော်တစ်ဆမှုတို့ကြောင့် ဖြစ်ပေါ် လာတဲ့ ပျက်စီး ဆုံးရှူးံးမှူတို့အတွက် သယ်ဆောင်သူ သင်္ဘောလိုင်းတွင်တာဝန်မရှိလို့ပြဌာန်းထားပါတယ်။
ဒါပေမဲ့ Article III, rule 1(c) မှာ သယ်ဆောင်သူ သင်္ဘောလိုင်းက လိုက်နာရမယ့်တာဝန်ကိုပြဌာန်း ထားပြီး ထိုတာဝန်သည် Article IV, rule2(c) အရ သယ်ဆောင်သူ သင်္ဘောလိုင်း ရရှိမည့် လျော်ကြေးပေးဆောင်ရမှုမှ ကင်းလွတ်ခွင့်၊ ကာကွယ်ခုခံပိုင်ခွင့် တို့အပေါ် ကျော်လွန်လွှမ်းမိုး ပါသည်။ ဆိုလိုတာက သယ်ဆောင်သူ သင်္ဘောလိုင်း အနေဖြင့် လိုက်နာရမည့်တာဝန်ကို မကျေပွန်ပါက၊ ကာကွယ်ခုခံပိုင်ခွင့် နှင့် ကင်းလွတ်ခွင့်များ ရရှိ ခံစား နိုင်ခွင့်မရရှိပါဘူး။ (Maxine Footwear Co. Ltd. V. Canadian Merchant Marine (1959).
Article III, rule 1(c) မှာ ဖော်ပြထားတာက "သင်္ဘောကုန်ခန်း၊ အအေးခန်း နှင့် ကုန်ထည့်သွင်း သယ်ဆောင်သည့် သင်္ဘော၏ အခြားအစိတ်အပိုင်း များကို ကုန်များ မထိခိုက်၊ မပျက်စီးဘဲ ထည့်သွင်း သယ်ဆောင်နိုင်အောင် သင်္ဘောမထွက်ခင်ကပင် ထိုက်သင့်သော် လုံလဝိရိယစိုက်ထုတ်၍ (due diligence) ပြုလုပ်ပေးလိုက်ရမည်" လို့ပြဌာန်းထားပါတယ်။
MAIB ရဲ့ အစီရင်ခံစာအရ သင်္ဘောလိုင်း အနေဖြင့် ကုန်သေတ္တာများကို တုတ်နှောင်ရာတွင် လျော့ရဲမှု ကြောင့် ကုန်သေတ္တာများပြိုလဲပျက်စီးခြင်း၊ ပင်လယ်ထဲသို့ ပြုတ်ကျရခြင်းသည် အကြောင်းတစ်ရပ် ဖြစ်သည်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်။ "Houlden v. S.S. Red Jacket, 1977" အမှုတွင် သင်္ဘောလိုင်းမှ ကုန်တင်ပို့သူအား ကုန်ပစ္စည်းထည့်သွင်းနိုင်ရန် ပံပိုးပေးသော် လိုင်းပိုင် ကုန်သေတ္တာများကို သင်္ဘော ၏ ကုန်ထည့်သည့် အစိတ်အပိုင်းအဖြစ်သတ်မှတ် ထားပါသည်။ ဒါကြောင့် Article III, rule 1(c) နဲ့ အကျုံးဝင် သက်ဆိုင်ပါတယ်။
Article III, rule2မှာ ဖော်ပြထားတာကတော့ သယ်ဆောင်သူ သင်္ဘောလိုင်းသည် ကုန်စည်များကို သင်တော့မှန်ကန်စွာ တင်ဆောင်၊ ကိုင်တွယ်၊ ထားသိုး ..... ရမယ်။ ဒီတာဝန်ဟာ Article IV မှာ ပြဌာန်းထားတဲ့ ကင်းလွတ်ခွင့်တွေ အပေါ်မူတည် သည်လို့ ဖော်ပြထားပါတယ်။
MAIB ရဲ့ report အရ CMA CGM G. Washington သင်္ဘောမှာ standard size မဟုတ်တဲ့ ၅၃ ပေ ကုန်သေတ္တာတွေကို ထားသိုပုံ မှားယွင်း တယ်လို့ ဖော်ပြထားပါတယ်။ ဒါကြောင့် သင်္ဘောလိုင်း အနေနဲ့ Article IV, rule 2(c) အရ ပင်လယ်ပြင် မှာတွေ့ကြုံရတဲ့ ဘေးသင့်မှုကြောင့် ဖြစ်ပေါ်ခဲ့ရတဲ့ ကုန်သေတ္တာများ ဆုံးရှုးံပျက်စီးမှု အတွက် လျော်ကြေး ပေးဆောင်ရမှုမှ ကင်းလွတ်ခွင့်ကို ရယူခံစားခွင့် မရနိုင်ပါဘူး။
CMA CGM G.Washington ကို စစ်ဆေးပေးရတဲ့ classification society ဖြစ်တဲ့ Bureau Veritas ကလည်း ၅၃ ပေ ကုန်သေတ္တာများအတွက် သူ့ရဲ့ စည်းမျဉ်းများကို ပြန်လည်ပြင်ဆင်လိုက်ပြီ ဖြစ်ပါတယ်။
ထိုငျဝမျရလေကျကွားတှငျမွနျမာသင်ျဘောသား ၁၀ ယောကျပါဝငျသော ကုနျသင်ျဘောတိမျးမှောကျ